Ukuhlaziywa kwamaphepha, iinombolo kunye neKeyynote ngokhuseleko kunye nokuphuculwa kokusebenza | Ndisuka mac
Amaphepha ahlaziyiweyo, amanani kunye ne-Keynote ngokhuseleko kunye nokuphuculwa kokusebenza
Ukusukela izolo iyafumaneka ukhuphelo, a hlaziya Amaphepha, amanani kunye neNkcazo. Esinye sezicelo ezisisiseko seApple sokubhala, ispredishithi okanye intetho. Kwiintsuku ezidlulileyo, besikuxelele oko zontathu ezi zicelo zasimahla. Kukuphela kokubheja kwinxalenye yeApple ngezicelo ezihambelana neeMacOs, ukuze sihlale sinayo yonke inkqubo yokusebenza eyi-100%, phantse kuyo nayiphi na imeko. Inguqulelo ehlaziyiweyo yinguqulelo 6.1.1. yamaphepha, 4.1.1. amanani kunye no-7.1.1. kwimeko ka Keynote.
Ngokomgaqo awufumani iindaba ezibalulekileyo, nje ukhuseleko kunye nokuphuculwa kokusebenza , kodwa kuyanconywa yinkampani ukuphonononga kunye nokuhlaziya isoftware enokubonakala ngathi inqanaba lesibini, ngasemva kweOfisi enkulu yeMicrosoft. Nangona eSoy de Mac kwizihlandlo ezininzi siye saphawula ngeempawu ezigqwesileyo kwezizicelo zithathu, ezingama-80% -90% zabasebenzisi ezihlangabezana ngokupheleleyo neemfuno zethu.
Nangona kunjalo, ukuba sifumanisa naluphi na utshintsho olubalulekileyo kwizicelo, siya kuphawula ngokukhawuleza kuyo kwiSoy de Mac.
Uhlaziyo olukhulu lokugqibela lwe- Amaphepha, amanani kunye neNkcazo Izise, ​​ukongeza kuhlaziyo oluncinci, ukubakho kokusebenza kwi-intanethi kuxwebhu olufanayo phakathi kwabasebenzisi abaninzi. Inyaniso, ukuba awuzange uwuzame lo msebenzi, ndincoma ukuba wenze uvavanyo kunye nelungu losapho okanye umhlobo. Kubonakala ngathi ngumlingo xa kwenziwe uhlengahlengiso oluthile, olubonisa ukuba ngubani owenza eli galelo kwaye ngokukhawuleza okukhulu. Emva koko, ngo-Matshi ophelileyo ezi zicelo zintathu zahlaziywa, eyona nto ibalulekileyo yokuvula iifayile ngeTouch ID ye-MacBook Pro entsha.
Ukukhuphela iinguqulelo ezintsha kufuneka uye kwiVenkile yeApple yeMac kwaye ucofe kwi icon yokugqibela kwibar ephezulu ebonisa uhlaziyo. Ngokucofa kuyo, kuya kufuneka ube neenguqulelo ezintsha onokuzikhuphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Amaphepha ahlaziyiweyo, amanani kunye ne-Keynote ngokhuseleko kunye nokuphuculwa kokusebenza
I-Universal Kit, iDisk Space kunye nePDF kwi-Word Converter, ngoku iyathengiswa kwi-Mac
Uyithumela njani i-imeyile kunye nesicelo sePosi